ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 31 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -30
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -32 →
၆။ သာသနာတော် စည်ပင်သာယာစေခြင်း
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာ ဆိုသည်မှာ မြင့်မြတ်လှစွာသော သဗ္ဗညုတ ရွှေဉာဏ်တော်ရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ အဆိုအဆုံးအမများပင် ဖြစ်သည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆိုအဆုံးအမများသည် ရုပ်နာမ်ရှိသူတို့ အတွက် ငြိမ်းအေးချမ်းသာမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ရုပ်နာမ်တို့အား ဆင်းရဲပူလောင်စေသော လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟမီးများကို မဂ်ရေစင်ဖြင့် ငြိမ်းသတ်၍ ငြိမ်းအေးစေနိုင်သည်။ မဂ်ရေစင်ကို မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်၌ ရရှိလေသည်။
ထို့ကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်သည် စည်ပင်သာယာစေရန်လည်းကောင်း၊ အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ စေရန်လည်းကောင်း၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းသည် မြင့်မြတ်သော ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရုပ်နာမ်ရှိသော လူသားများ အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လူတိုင်း လူတိုင်း မိမိတို့၏ ရင်ထဲ၌ သာသနာတည်ရန် သို့မဟုတ် ဓမ္မစေတီတည်ရန် ကျင့်ကြံကြိုးစား အားထုတ်သင့်လှသည်။ မိမိတို့၏ ရင်ထဲ၌ သာသနာ ဓမ္မစေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်းသည် မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်အတွက် တဖက်တလမ်းမှ ဆောင်ထမ်းရာမည်ပါသည်။ သာသနာ စည်ပင်သာယာစေရေးနှင့် အဓွန့်ရှည် တည်တံ့စေရေးအတွက် ရည်ညွှန်းလျက်။
၇။ တရားသိလျှင် ဘုရားရှိသည် တရားတော် ကောက်ချက်များ။
အမှန်တရား လေးမျိုးရှိသည်။ ပထမ အမျိုးအစားမှာ ရုပ်နာမ်သည် ဆင်းရဲသည်ဟူသော သဘောပင် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ အမျိုးအစားမှာ ဆင်းရဲသော ရုပ်နာမ်၏ အကြောင်းရင်းသည် အမှန်ရှိ၏ ဟူသောသဘောပင် ဖြစ်၏။
တတိယ အမျိုးအစားမှာ ဆင်းရဲခြင်း၏ ချုပ်ငြိမ်းရာ သဘောအမှန်ပင် ဖြစ်သည်။
စတုတ္ထနှင့် နောက်ဆုံး အမျိုးအစားမှာ ဆင်းရဲခြင်း၏ ချုပ်ငြိမ်းရာ သဘောနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်လုံသော အကြောင်းရင်းမှန် ဧကန်ရှိသည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဆင်းရဲခြင်းကို သိနားလည်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၏ ကြောင်းရင်းကို သိနားလည်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း ချုပ်ငြိမ်းရာ ကို သိနားလည်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၏ အကြောင်းကို သိနားလည်ခြင်းသည် တရားသိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထို တရားကိုသိလျှင် သဗ္ဗညုတ မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ တည်ရှိမှုကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် သိရှိနားလည် သဘောပေါက် သွားပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် တရားစစ် တရားမှန်ကို သိရှိနားလည်သော ပညာရှင်များသာလျှင် ဘုရားစစ် ဘုရားမှန်၏ သို့မဟုတ် သဗ္ဗေညုတ ရွှေဉာဏ်တော်ကြီး၏ တည်ရှိမှုကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ဉာဏ်ပညာနှင့် ကောင်းစွာသိမြင် ထိုးထွင်းဆင်ခြင် နိုင်ပါလိမ့်မည် ဟူသတည်း။
၈။ ၀ိပဿနာ လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်ရာ၌ ကြုံတွေ့ရသော
အခက်အခဲများ၊ တရားတော် ကောက်ချက်များ။
၀ိပဿနာ နည်းပညာသည် မိမိအတ္တကို ပယ်စွန့်ရသော ကျင့်စဉ်နည်းပညာ ဖြစ်သည်။ အနမတဂ္ဂ သံသရာမှ အကျင့်ရ အလေ့ထုံလာသော ငါအတ္တ သိပ်သည်းကျစ်လစ်မှုကို တလွှာခြင်း တလွှာခြင်း ချေဖျက်ရသည်ဖြစ်၍ ခက်ခဲနက်နဲသည်။
၀ိပဿနာ ကျင့်စဉ်သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ဉာဏ်ပညာနှင့် ယှဉ်ရသည်ဖြစ်၍ သိနိုင်၊ မြင်နိုင်၊ တတ်ကျွမ်းနိုင်ရန် ခက်ခဲနက်နဲသည်။
၀ိပဿနာကျင့်စဉ်သည် တိကျသေချာရသည်ဖြစ်၍ အတိမ်းအစောင်း မခံသဖြင့် ခက်ခဲနက်နဲသည်။
အာသ၀တို့၏ ယိုစီးမှုကို ဟန့်တာပိတ်ပင် ချေဖျက်အောင်မြင်ခြင်း၌ ခက်ခဲနက်နဲသည်။ အ၀ိဇ္ဇာကို ၀ိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြင့် ထိုးဖေါက်ရှုသတ် ပိုင်းဖြတ်ခြင်း၌ ခက်ခဲနက်နဲသည်။
၉။ သစ္စာရှင်သည် မေတ္တာရှင်ဖြစ်သည်
သစ္စာရှင်သည် အမှန်မြင်ရန် ဉာဏ်ယှဉ်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ သစ္စာရှင်သည် အမှန်သစ္စာအား ဖုံးလွှမ်းနေသော မောဟခေါ် အ၀ိဇ္ဇာကို တိုက်ခိုက်ဖြိုဖျက်သည်။
သစ္စာရှင်သည် မိမိကိုယ်တိုင် အပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်အောင် တည်ဆောက်သည်။ သစ္စာရှင်သည် မိမိကိုယ်ကို အမှန်အတိုင်း မြင်သိနိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်း အမှု၌ အကျင့်ရနေသူ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် တပါးသော ရုပ်နာမ်တို့ အပေါ်၌လည်း ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ မထားမူ၍ ယထာဘူတကျကျ ရှုမြင်သုံးသပ် နိုင်မှုရှိသည်။ သစ္စာရှင်သည် ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်း ညစ်ထေးမှုများကို ပယ်စွန့်ထားသည်ဖြစ်၍ တပါးသူအပေါ် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ အပြုသဘောဖြင့် ကောင်းကျိုးလိုလားသည်။ သစ္စာရှင်သည် တပါးသူကို ချမ်းသာစေချင်၏။
ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည် .. ..
Tags: ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ
This entry was posted in Buddhism and tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ. Bookmark the permalink.